कर्मचारी प्रति शंका नगर्न रे.न.पा. कार्यकारीको अनुरोध – Gulminews
Home/जिल्ला समाचार/कर्मचारी प्रति शंका नगर्न रे.न.पा. कार्यकारीको अनुरोध
कर्मचारी प्रति शंका नगर्न रे.न.पा. कार्यकारीको अनुरोध
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७४ पुष २४, सोमबार १६:५४ मा प्रकाशित
गुल्मी, पुस २४ । गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाको कर्मचारी छनौट प्रकृयामा असन्तुष्टी जनाएका त्यस नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुलाई कर्मचारी प्रति कुनै शंका नगर्न कार्यकारी अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले अनुरोध गरेका छन् । त्यस नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखा अन्तरगत सिमिचौर स्वास्थ्य केन्द्रको वर्थिङ्ग सेन्टरका लागि करारमा अनमी र सोही शाखाका लागि सहायक कर्मचारी छनौटका लागि पुस–९ गते कार्यकारी अधिकृत अर्यालय दरखास्त सुचना टाँस गरी उम्मेदवार आव्हन गरेका थिए ।
नेकपा एमालेबाट त्यस नगरपालिकामा प्रतिनिधत्व गर्ने जनप्रतिनिधीहरुले भने विरोध जनाएका छैनन । कांग्रेसबाट प्रतिनिधत्व गर्ने जनप्रतिनिधीहरुले यस प्रति विरोध जनाएका हुन् । त्यसो त उनिहरुले मेयर डिल्लीराज भुसालले आफ्नो पार्टीको चुनावी सभामा कांग्रेसबाट विजयी वडाध्यक्ष कुलबहादुर टण्डन लगायतलाई भौतिक आक्रमण गर्न कार्यकर्तालाई उक्साउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै गत एक महिना देखि नगर कार्य समितिको बैठक समेत अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । अहिले फेरी कर्मचारी नियुक्ति प्रकृयाको बखेडा निकालेको नगर कार्य समिति वाहिरका विपक्षीहरुको आरोप छ ।
स्वास्थ्य विभागले करार सेवाका लागि स–सर्त अनुदानको कार्यक्रम अन्तरगत पठाए अनुसार प्रकृया अगाडी बढाईएको अर्यालको भनाई छ । आईतवार जनप्रतिनिधीहरुले कर्मचारीतन्त्र हावी भएको आरोप लगाएको समाचार बाहिर आए लगत्तै आज विहान वुटवलमा रहेको बताउने अर्यालको टेलिफोन मार्फत यस्तो धारण बाहिर आएको हो । प्रस्तुत छ उनि संग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी –
उक्त नियुक्ति प्रकृयाका लागि कार्यपालिकाबाट पारित गराउनु पर्ने तर विषयगत समितिलाई समेत सुचित नगरी कर्मचारीहरुले मनोमानी नियुक्ति प्रकृया अगाडी बढाएको प्रति केहि जनप्रतिनिधीहरुको विरोध छ नि ?
हामीले त विधि–प्रकृया मिलाएरै गरेका हौं । जिल्ला समन्व्य समिति , जिल्ला प्रशासन , कोलेनीका र जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पत्रचार गरेका छौं । १५ दिने सुचना टाँस पनि गरे कै हौं । नगरपालिकाको वोर्डमा सुचना सवैले देख्न सक्नु हुन्छ । हामीले कसरी खुसुक्क गरेको भन्न मिल्छ ? विधी र प्रकृया त्यही हो । जो कोहीले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातवर मिलाए कै थियौं । यति गर्दा पनि हामीलाई दोषरोपण गर्नु खै उहाँहरुले बुझेर पनि नबुझे जस्तो हामीले महशुस गरेका छौं ।
तपाई कर्मचारीहरुले मेयर उपमेयर सम्मलाई पनि जानकारी नगराएको सुनिएको छ नि ?
मेयर ज्यु विरामी भएर काठमाण्डौ हुनुहुन्थ्यो । हो उहाँ र उपमेयर सम्मलाई जानकारी गराएको भए हुन्थ्यो तर विरामी भएका कारण गराउन सकिएन । तर नगर सभा र केन्दका संवन्धित विभागबाट पारित भएका कार्यक्रमहरु नगर प्रशासनले नियमित कार्यका रुपमा गर्न पाउँछ र गरिएको हो ।
कर्माचारीतन्त्र हावी भएको आरोप छ नि ?
यो हुनै सक्दैन । हामी कर्मचारीहरु जनप्रतिनिधीहरु कै मातहतमा रहेर काम गर्ने हो । नगरबाट पैसा छुटाएर कर्मचारी राख्नु परेमा कार्य समितिमा मैले पेश गर्नै पर्छ । हिजो हाम्रा सहायक प्रशासकिय अधिकृत सुरेशपन्थीले भनि सक्नु भएको छ कि विभागबाट आएको ससर्त अनुदानको कार्यक्रमलाई त्यही प्रकृयाबाटै अगाडी बढाउने हो ।
मेरो यहि आग्रह छ कि जनप्रतिनिधी ज्युहरुले नबुझेको भए बुझी दिनु प¥यो । त्यस वेला नियुक्ति गर्न पाईदैन । एक वर्ष कार्यक्रम हो यो । अव छ महिना मात्र बाँकी छ । अव राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हन थालेकोले आचारसंहिता लाग्छ । ढिला भयो भने यहाँका जनतालाई आएको सुविधा गुम्न जान्छ र अर्को वर्ष यो कार्यक्रम गुल्मीले पाउँदैन । म फेरी पनि निवेदन गर्दछु कि हामी कमचारीहरु नियमित प्रशासनिक काम गर्ने हो , कहिल्लै पनि जनप्रतिनिधीसंग हावी हुँदैनौं, हामी प्रति कुनै शंका नगर्न मेरो विनम्र अनुरोध छ ।